Ndị fọdụrụ ná ndị Izrel ga-ebirighachi n’ala ha (1-30)
Rechel na-ebe ákwá maka ụmụ ya (15)
Ọgbụgba ndụ ọhụrụ (31-40)
31 Jehova kwuru, sị, “N’oge ahụ, m ga-abụrụ ezinụlọ niile dị n’Izrel Chineke, hanwa abụrụ ndị m.”+ 2 Jehova kwukwara, sị: “Mgbe ndị Izrel nọ na-aga ka ha nweta ebe ha ga-ezu ike,Chineke meere ndị mma agha na-egbughị amara n’ala ịkpa.” 3 Jehova si ebe dị anya bịakwute m, sị: “M ga-ahụ gị n’anya ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ otú a m si hụ gị n’anya mere m ji dọta gị ebe m nọ.*+ 4 Ndị Izrel,* m ga-arụghachi unu otú e si arụghachi ụlọ.+ Unu ga-ewere obere ịgbà unu ọzọGaa na-agba egwú, na-enwekwa aṅụrị.+ 5 Unu ga-akọ ubi vaịn ọzọ n’ugwu Sameria.+ Ndị ga-akọ ya ga-atakwa mkpụrụ ya.+ 6 Otu ụbọchị, ndị nche na-anọ n’ugwu ndị dị n’Ifrem ga-eti mkpu, sị: ‘Bịanụ ka anyị gaa Zayọn, gakwuru Jehova bụ́ Chineke anyị.’”+ 7 N’ihi na Jehova kwuru, sị: “Jirinụ ọṅụ bụọrọ Jekọb abụ. Tienụ mkpu ọṅụ maka na unu bụ ndị ndú mba dị iche iche.+ Kọsaanụ ya. Toonụ Chineke, sịkwanụ,‘Jehova, biko, zọpụta ndị gị, bụ́ ndị fọrọ n’Izrel.’+ 8 M ga-esi n’ala dị n’ebe ugwu kpọlata ha.+ M ga-esi n’ime ime ụwa kpọkọta ha.+ M ga-akpọkọta ma ndị ìsì ma ndị ngwọrọ+Ma ụmụ nwaanyị dị ime ma ụmụ nwaanyị ime na-eme. Ha ga-adị ọtụtụ mgbe ha ga-alọta.+ 9 Ha ga-ebere ákwá lọta.+ M ga-akpọlata ha mgbe ha na-arịọ m ka m meere ha amara. M ga-eduga ha n’iyi dị iche iche,+Dugakwa ha n’ala dị larịị nke ha na-agaghị ada ada na ya. N’ihi na abụ m Nna Izrel, Ifrem bụkwa ọkpara m.”+ 10 Mba dị iche iche, nụrụnụ ihe Jehova kwuru,Kọsaakwanụ ya n’agwaetiti ndị dị anya.+ Ọ sịrị: “Onye chụsasịrị ndị Izrel ga-akpọkọta ha. Ọ ga-echebekwa ha otú onye ọzụzụ atụrụ si echebe ìgwè atụrụ ya.+ 11 N’ihi na Jehova ga-azọpụta Jekọb,+Napụtakwa ya n’aka onye ka ya ike.+ 12 Ha ga-abịa ebe dị elu na Zayọn na-eti mkpu ọṅụ.+ Ihu ha ga na-egbukekwa egbuke n’ihi ịdị mma* Jehova,N’ihi ọka na mmanya ọhụrụ+ na mmanụ,Nakwa n’ihi ụmụ ewu na ụmụ atụrụ na ụmụ ehi ha.+ Ha* ga-adịkwa ka ubi mmiri na-ede nke ọma.+ Ha agaghịkwa ahụsi anya ọzọ.”+ 13 “N’oge ahụ, ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke na ụmụ okorobịa na ndị agadi+Ga-eji ọṅụ na-agba egwú. M ga-eme ka uju ha na-eru bụrụzie ịṅụrị ọṅụ.+ M ga-akasi ha obi, meekwa ka ha kwụsị iru uju ma ṅụrịwa ọṅụ.+ 14 M ga-enye ndị nchụàjà* nri karịrị akarị. Ndị m ga na-enwekwa obi ụtọ n’ihi ihe ọma ndị m ga-emere ha.”+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a. 15 “Jehova kwuru, sị: ‘A na-anụ olu ndị na-ebe ákwá arịrị na olu ndị obi jọrọ njọ, ha ana-ebe ákwá na Rema:+ Rechel na-ebe ákwá maka ụmụ ya.+ O kweghị ka a kasie ya obi n’ákwá ọ na-ebe maka ụmụ ya,N’ihi na ha anọghịzi.’”+ 16 Jehova kwukwara, sị: “‘Ebezila ákwá. Hichaa anya mmiri,N’ihi na a ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ ị rụrụ. Ụmụ gị ga-esi n’ala ndị iro ha lọta.+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.’ 17 ‘Olileanya dị na ihe ga-adịrị gị mma n’ọdịnihu.+ Ụmụ gị ga-alọta n’ala ha.’+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.” 18 “Anụla m ka Ifrem na-ebe ákwá arịrị, na-asị,‘Adị m ka nwa ehi a na-azụghị azụ. Ma, ị gbaziela m. Amụtakwala m ihe na ya. Kpọghachite m, m ga-alọghachikwa,N’ihi na ị bụ Jehova bụ́ Chineke m. 19 M kwara ụta ma lọghachi.+ Mgbe e mere ka m ghọta ihe m mere, o wutere m nnọọ na m mere ya.* N’ihi ihe ndị m mere n’oge m bụ okorobịa,Ihere nọ na-eme m, obi m nọkwa na-ama m ikpe.’”+ 20 Jehova kwukwara, sị, “Ọ̀ kwa Ifrem bụ nwa m hụrụ n’anya na nwa dị m n’obi?+ Ugboro ole m baara ya mba bụkwa ugboro ole m ga-echeta ya. Ọ bụ ya mere m* ji na-achọsi ya ike.+ M ga-emetekwara ya ebere.”+ 21 “Gwunye ihe ị ga-eji ahụwa ụzọ ama. Dowekwa ihe a ga-eji amata ụzọ.+ Uche gị dịrị n’okporo ụzọ ị ga-esi aga ebe ị na-aga.+ Ndị Izrel,* lọtanụ. Lọtanụ n’obodo unu dị iche iche. 22 Nwaanyị* na-agba n’èzí, ole mgbe ị ga-akwụsị ịgba n’èzí? Jehova emeela ka ihe ọhụrụ na-eme n’ụwa: Nwaanyị ga-eji ike ya niile na-achọ nwoke.” 23 Jehova nke ụsụụ ndị agha, bụ́ Chineke Izrel, kwuru, sị: “Mgbe m ga-akpọkọta ndị Juda a dọọrọ n’agha, ha ga-anọ n’obodo ndị dị na Juda, sị: ‘Ugwu dị nsọ,+ nke bụ́ ebe a na-anọ eme ezi omume,+ ka Jehova gọzie gị.’ 24 Ndị bi n’obodo niile dị na Juda ga-ebikọ ọnụ, ma ndị ọrụ ubi ma ndị na-azụ atụrụ.+ 25 N’ihi na m ga-eme ka onye* ike gwụrụ nwee ume, meekwa ka afọ ju onye* ọ bụla ike gwụrụ.”+ 26 N’oge a, m tetara meghee anya m. Ụra m rahụrụ tọkwara m ụtọ. 27 Jehova kwuru, sị, “Oge na-abịa mgbe m ga-eme ka ndị Izrel na ndị Juda mụbaa. M ga-emekwa ka anụ ụlọ ha mụbaa.”+ 28 Jehova kwukwara, sị, “Otú ahụ m kpachaara anya na-achọ otú m ga-esi fopụ ha, kwatuo ha, tida ha, mee ha ihe, laakwa ha n’iyi,+ otú ahụkwa ka m ga-akpachara anya na-achọ otú m ga-esi rụlite ha ka ụlọ, kụọkwa ha ka mkpụrụ.”+ 29 “N’oge ahụ, ha agaghịzi na-asị, ‘Ọ bụ nna nna anyị hà rachara mkpụrụ vaịn na-achaghị acha, ma, ọ bụ ụmụ ha ka ezé na-eri izizi.’+ 30 Onye ọ bụla ga na-anwụzi n’ihi mmehie nke ya. Ọ bụzi onye rachara mkpụrụ vaịn na-achaghị acha ka ezé ga-eri izizi.” 31 Jehova kwuru, sị, “Oge na-abịa mgbe mụ na ndị Izrel na ndị Juda ga-agba ọgbụgba ndụ ọhụrụ.+ 32 Ọ gaghị adị ka ọgbụgba ndụ ahụ mụ na ndị nna nna ha gbara n’ụbọchị m seere ha n’aka si n’Ijipt kpọpụta ha,+ ‘ya bụ, ọgbụgba ndụ m hanwa mebiri,+ n’agbanyeghị na ọ bụ naanị m bụ onyenwe ha.’* Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.” 33 Jehova kwukwara, sị, “Ọgbụgba ndụ mụ na ndị Izrel ga-agba mgbe oge ahụ gachara* bụ na m ga-etinye iwu m n’ime ha,+ deekwa ya n’obi ha.+ M ga-abụ Chineke ha. Ha ga-abụkwa ndị m.”+ 34 Jehova sịkwara, “A gaghịzi enwe onye ga-akụziri onye agbata obi ya na nwanne ya, sị, ‘Mara Jehova.’+ N’ihi na ha niile ga-ama m, malite n’onye kacha nta n’ime ha ruo n’onye kacha ukwuu.+ N’ihi na m ga-agbaghara ha ajọ omume ha. Agaghịzi m echeta mmehie ha.”+ 35 E nwere ihe Jehova kwuru. Ọ bụ yanwa kere anyanwụ ka ọ na-enye ìhè n’ehihie,Tiekwa iwu ka ọnwa na kpakpando na-enye ìhè n’abalị. Ọ bụ ya na-eme ka oké osimiri na-eme mkpọtụ, na-emekwa ka ọ na-amali elu. Aha ya bụ Jehova nke ụsụụ ndị agha.+ O kwuru, sị: 36 “‘Ebe ọ bụ na e nweghị mgbe iwu e nyere ihe ndị a na-agaghịzi enwe isi,E nweghịkwa mgbe ndị Izrel ga-akwụsị ịbụ mba n’anya m.’+ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.” 37 Jehova kwukwara, sị: “‘Otú ahụ a na-agaghị atụli eluigwe atụ̀, otú ahụkwa a na-agaghị achọpụtali ntọala ụwa, ka mụnwa na-agaghị ajụ ndị Izrel niile n’agbanyeghị ihe niile ha mere.’ Ọ bụ Jehova kwuru ihe a.”+ 38 Jehova kwukwara, sị, “Oge na-abịa mgbe a ga-arụrụ Jehova obodo+ malite n’Ụlọ Elu Hananel+ ruo n’Ọnụ Ụzọ Ámá Dị n’Ebe Mgbidi Sụkọtara Isi.+ 39 A ga-agbatị eriri e ji atụ̀ ihe,+ ya eruo n’ugwu Gereb, tụgharịakwa ruo Goa. 40 Ebe ndị a ga-adị nsọ n’anya Jehova:+ Ndagwurugwu ebe a na-ebusa ozu na ebe a na-awụnye ntụ* nakwa ala niile dị ruo Ndagwurugwu Kidrọn,+ ruokwa n’akụkụ Ọnụ Ụzọ Ámá Ịnyịnya+ nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ. E nweghị ihe ga-eme ka e fopụ ndagwurugwu a ma ọ bụ bibie ya ọzọ.”
^ Ma ọ bụ “Ọ bụ ya mere m ji ghara ịkwụsị ịna-egosi gị ịhụnanya pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “n’ihi ihe ọma ndị si n’aka.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi ndị nchụàjà.”
^ Ma ọ bụ “etiri m aka n’apata ụkwụ m ná mwute.”
^ Ya bụ, ndị Izrel.”
^ O nwere ike ịbụ, “di nwe ha.”
^ Ya bụ, mgbe ọgbụgba ndụ nke mbụ gachara.
^ Ma ọ bụ “ntụ ya na abụba gwakọtara,” ya bụ, ntụ a gwakọtara ya na abụba e ji chụọ àjà.